५ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी कम्पनीको शेयर कारोबार | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर ५ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी कम्पनीको शेयर कारोबार
मुख्य खबर, लगानी 512 views
५ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी कम्पनीको शेयर कारोबार
१ सय ७६ कम्पनीको १० हजार ७ सय ४६ पटकको व्यापार, रू. ९१ करोड ७७ लाख बराबरको शेयर कारोबार
काठमाडौं । साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक ३ दशमलव ५४ प्रतिशत बढेको छ । कारोबार शुरू भएदेखि बढेको बजार अन्त्यमा ४४ दशमलव २६ अङ्क बढेर १ हजार २ सय ९४ दशमलव ६५ विन्दुमा पुगेको छ । यस दिन १ हजार २ सय ५० दशमलव ३९ विन्दुबाट शुरू भएको कारोबार २ बजेर २० मिनेटमा ५२ अङ्क बढेर १ हजार ३ सय २ दशमलव ५० विन्दुमा पुगेको थियो । सोही समयमा नेप्से परिसूचक ४ दशमलव १७ प्रतिशतले बढेको थियो । यस दिन ५ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी कम्पनीको शेयर कारोबार भएको छ । १ सय ७६ कम्पनीको १० हजार ७ सय ४६ पटकको व्यापारमा २३ लाख १२ हजार ८ सय ६५ कित्ता शेयरको रू. ९१ करोड ७७ लाखबराबरको शेयर कारोबार भएको छ । करीब ३ महीनापछि सो रकमको शेयर कारोबार भएको हो । शेयरबजारका विश्लेषकहरूले चैत महीना शेयर किन्ने सिजन र असोज विक्री गर्ने सिजन भन्ने गरेका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा भएको लगानीयोग्य पूँजीको अभाव कम हुँदै जानु र बैङ्कहरूले विदेशी ऋण ल्याउन पहल शुरू गर्नुका कारण बजार सकारात्मक हुँदै गएको हो । बजार घटिरँहदा लगानीकर्ताले पूँजीबजार विस्तारका लागि जानकारीमूलक कार्यक्रमहरू गरेका थिए । बैङ्क तथा वित्तीय कम्पनीहरूको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुने दिन नजीक भएकाले बजार बढेको लगानीकर्ता सङ्घका अध्यक्ष नवराज सुवेदी बताउँछन् ।
लगानीकर्ता राजु पौड्यालका अनुसार बजार धेरै घटिसकेको अवस्थामा लगानीकर्ता सकारात्मक समाचारको पर्खाइमा थिए । उनले भने, ‘केही समय अघिदेखि लगानीकर्ता सङ्घका पदाधिकारीहरूले नियामक निकायका पदाधिकारी र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरलाई भेटेपछि सरकार सकारात्मक भएको कुरा आयो, गभर्नरले मार्जिन कर्जा बढाउँछौं भन्ने कुरा आएपछि बजार बढ्न थालेको हो ।’ बजार घटेको बेलामा मुद्दतीमा लगानी बढाएका म्युचुअल फण्डहरूले बजार सकारात्मक भएपछि पुनः शेयरमा लगानी गरेपछि बजार एकै दिन उच्च अङ्कले बढेको उनको तर्क छ । सरकारको आर्थिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेटमा बजारको पूर्वाधार विकास र दिगो विकासजस्ता योजना समेट्ने अर्थमन्त्रीको भनाइपछि लगानीकर्ता सकारात्मक भई पूँजीबजार प्रवेश गरेको उनको भनाइ छ ।
यस दिन कारोबार रकम अघिल्लो कारोबार भएको दिनको तुलनामा ४८ दशमलव १६ प्रतिशतले बढेको छ । यस दिन करोबार रकम रू. २९ करोड ८३ लाख बढेको छ । कुल बजार पूँजीकरण ३ दशमलव ५६ प्रतिशतले बढेर रू. १५ खर्ब १७ अर्ब पुगेको छ । यस दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इण्डेक्स ३ दशमलव ४५ प्रतिशत बढेर २ सय ७६ दशमलव शून्य ९ अङ्क पुगेको छ ।
त्यसैगरी, यस दिन नेप्सेको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स न्युट्रन जोन अथवा ५५ दशमलव ९५ स्केलमा रहेको छ । यसले बजारमा खरीद विक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । नेप्सेको एडी रेशियो १० दशमलव ७८ प्रतिशत रहेको छ । यसले बजार बुलिश वृत्तिमा रहेको देखाउँछ ।
कारोबार भएका १० समूहको परिसूचकमा सबै समूहको परिसूचक बढेको छ । सबैभन्दा उच्च प्रतिशतले परिसूचक बढ्नेमा बीमा समूह र लघुवित्त समूह रहेका छन् ।
बीमा समूहको परिसूचक ६ दशमलव १७ प्रतिशत र लघुवित्त समूहको ६ दशमलव शून्य ८ प्रतिशतले बढेको छ । यी दूई समूहको परिसूचक उच्चले बढ्दा नेप्से परिसूचक बढ्न पुगेको हो । नबिल बैङ्क लिमिटेडको प्रतिकित्ता रू. ९ सय ९९ मा रू. ३ करोड १४ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । दुई कम्पनीको शेयर मूल्य १० प्रतिशतले र आठ कम्पनीको शेयर मूल्य ९ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ । सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था र महुली सामुदायिक लघुवित्तको शेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ ।
राधी विद्युत् कम्पनीको शेयर मूल्य ३ दशमलव ४३ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार भएमध्ये १ सय ५१ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने १४ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । ११ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ ।